Umthandazo kuMama oMnandi Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
La umthandazo kumama oswiti Nguwo umthandazo wokunyaniseka kuMama omkhulu wayo yonke indalo, apha ungawufunda lo mthandazo unamandla
1 Umthandazo kuMama oMnandi: UMariya nokubaluleka kwakhe
2 UMaria kunye nemibhiyozo yakhe
3 Umthandazo kamama omnandi
4 Umama Omkhulu wehlabathi
Umthandazo kuMama oMnandi: UMariya nokubaluleka kwakhe
Kwimbali yenkolo, uMariya wayethetha ukuqala kweziganeko ezinkulu ze el mundo. Kuba uMoya oyiNgcwele wamnika iindaba ezimnandi zokuba uMsindisi omkhulu wehlabathi uzakuba sesibelekweni sakhe, uMary wajongana nemiceli mngeni eyahlukeneyo emele ukholo loluntu oluzalisekisa ukuthanda kukaThixo.
Ukuba namandla okwala nokungahoyi, uMaría ugqiba kwelokuba amkele ikamva lakhe kwaye athobele oko sele kusekwe. Kunye nomyeni wakhe uJoseph, bamkela usana olunguYesu waseNazarete kwezona meko ziphantsi. Oku kuthetha ukuba nokuba umntu okholelwayo uphi na ehlabathini, uyakubakho uYesu esenza ubomi.
Ukusukela ekufikeni kuka Yesu, uMariya waphila amaxesha amangalisayo kwaye uninzi lwezi lubaliswa kwiimfihlelo zika Ingcwele yeRosari. Kwakufuneka abone ukuba unyana wakhe uliphila njani ikamva lakhe lokusindisa umhlaba ngexabiso lobomi bakhe, eso sihlandlo sokubandezeleka xa wabona lonke uhambo olwenziwa ngunyana wakhe enomnqamlezo emqolo emva koko wabethelelwa emnqamlezweni.
Uye wabona indlela unyana wakhe anyukele ngayo emazulwini kwaye kamva wabhengezwa njengoKumkanikazi onguMongami wayo yonke into esele ikho kwaye ibikho. Ngaphandle kwamathandabuzo, ubomi bukaMariya babungumqondiso wokuba umntu onokholo olupheleleyo kuThixo uyavuzwa ngaphandle kweziganeko ezibuhlungu nezomeleleyo anokufumana kuzo.
UMaria kunye nemibhiyozo yakhe
Ukubaluleka kwayo kwinkolo kukhulu kangangokuba kukho imihla enikezelwe kuyo, efana noJanuwari 1, Matshi 25 (usuku lokubhengezwa), ngoMeyi 31 (Ukutyelelwa kukaMariya kuElizabethe), Agasti 15 (Usuku loNyuko lukaMariya), Nge-8 kaSeptemba (ukuzalwa kukaMariya), ngoSeptemba 15 (uMama wethu weZintlungu), ngo-Novemba 21 (Ukunikezelwa kukaMariya), ngo-Novemba 27 (iMedical Miradi), ngoDisemba 8 (i-Immaculate Conception), phakathi kwabanye.
Kukho amawaka emithandazo yokuhlonipha ubungcwele bakhe, ukuzinikela kunye nokholo olunjengolu: Yho Mariya, Makubongwe ubunyulu bakho, Umthandazo weSanta Bernard, La Salve, umthandazo othi "Phantsi kokhuseleko lwakho", "Ndiboleke, mama .. . ”, IRosari eNgcwele, Ukuzivocavoca ngeentlungu ezisixhenxe zikaMama kaThixo kunye umthandazo kuMama oMnandi. Unokuba nomdla ukuthandazela ishishini.
La Umama othandekayo umthandazo
Kumthandazo ngamnye onikezelwe kwiNtombikazi enguMariya, ukuzinikela okubalulekileyo okukhoyo kulo mntu mkhulu kuyaphawulwa. Ukuzinikela kwakhe akwenziwanga ukuba abe ngumama kaYesu kuphela, ikwaluphawu lomandla, ukholo kunye nesibindi. Owona mzekelo ubambekayo kukuba uluntu lunokuhlala ngolonwabo ngokholo, lube neenkolelo ezicacileyo kwaye ngaphandle kokuphulukana nokukholelwa ekukholelweni. Apha ungafunda ifayile ye- Umama othandekayo umthandazo:
Umama omnandi, sukuhamba
yiza nam kuyo yonke indawo
Kwaye ungaze undishiye
Kuba undikhusela kakhulu
yenza uBawo andisikelele,
uNyana noMoya oyiNgcwele.
Sisivakalisi esilula nesifutshane, kodwa oko akuthethi ukuba ayinamandla amakhulu. Ukuthandaza kuthetha ukuqonda ukuba ukholo nenkolelo zibalulekile, ke ngoko, okona ukholo sinalo, kokukhona kuya kuba namandla ukuthandaza. Intombi eNkulu enguMariya ihambela kwabo bayifunayo kwaye ngubani omnika imbeko, uthando kunye nokholo, uva iintliziyo kwaye abancede kubomi babo bemihla ngemihla. Kulungile ukukhumbula ukuba ngubani osincedayo ngawo onke amaxesha, hayi kuphela xa sijamelene namaxesha anzima kwaye anzima.
Umama Omkhulu wehlabathi
Njengomama, uthando lweNtombikazi enguMariya alunabugovu, lukhulu kwaye alupheli. Ingubo yakhe igubungela ngamnye wabathembekileyo ngokungathi ngunyana, unceda abo bangayifumananga indlela yabo, aqhubeke nokukhokela abo sele beyifumene kwaye amkele abo sele begqibile ngayo ngezandla ezishushu. Ukhathalele intlalo-ntle yabo bamfunayo kwaye ubathethelele emehlweni kaThixo.
Ihlabathi belihlala lifuna umama onjengoMariya, onothando, osisilumko nolungileyo. Umntu ongakhathalelanga kuphela ukukhathalela izinto ezibonakalayo zonyana wakhe, kodwa nomntu onomdla wokunceda kuwo onke amanyathelo, azalise uthando kwaye uhlala efundisa kuwo onke amabakala obomi.
UMariya wayehlala ekulungele ukubizwa nguThixo, kwaye uyaqhubeka ekulungele ukwenza egameni lamakholwa akhe. Luphawu lwenkolo nokhuselo kwindalo iphela, wonke umntu uyazi umzabalazo ababenawo xa bejamelene nobunzima kwaye baphela kanjani beboyisa ngenxa yeNkosi, kumakhaya amaninzi kukho umfanekiso oqingqiweyo, umfanekiso okanye into enxulumene nayo. ifanekisela uMama omkhulu okhusela abo bahlala okanye abakhoyo kwindawo ethile.
Ukuzincama okubandakanya ukunyamezela iziqendu ezininzi ezonakalisayo kubonisa ukuba umama akanakushukunyiswa kwaye ngakumbi xa esazi ukuba ukukholwa nokuba nokholo kuya kumkhupha kuyo nayiphi na imeko eza kuye. UMaría ngumntu ohlonitshwayo ngenxa yalonto, uhlala ezinikele kwaye esamkela wonke umzuzu ahlala kuwo esazi ukuba yonke into iyinxalenye yesicwangciso sikaThixo esasikhona kuye.
Ngaphandle kokubona ukuba yonke into iya isiba nzima, wayesazi ukuba ngaxa lithile yonke into iza kuphucuka. Omnye umzekelo wokholo lwakhe olugqithisileyo, lokukhuseleka kwakhe, ngumzekelo kwilizwe lonke, ezalisekisa injongo yakhe kwaye enombulelo wokuphila ngendlela awayephila ngayo. Ukumamele, ujonge kuwe, ulinde ukuba uvule intliziyo yakho kwaye umamkele kubuqaqawuli bakhe obuvela kuThixo ukuze akuncede.
Umama akaze asilele, kwaye iNtombikazi enguMariya nayo ayiphumeleli, uyayifunda umthandazo kuMama oMnandi, ngamandla nokholo ukwenza onke amazwi alo azalisekiswe. Ndiyathemba ukuba iNtombikazi enkulu iyakuthandazela ngalo mzuzu ungqalileyo xa ufunda umthandazo.